Akụkọ - Otu esi ahọ ezigbo osi nri
Igba Iron Cookware
Igba Iron Trivet
Ije Ozi osisi tree
Etu ị ga-esi esi nri nri
Ndị a na-esi nri dị ọnụ ahịa dị elu dị a reallyaa dị mfe karịa karịa ngwaahịa nkịtị nwere ọtụtụ narị yuan? N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa agwala akwụkwọ akụkọ anyị na ụfọdụ ihe a na-akpọ nnukwu ihe na igwe igwe ọnụahịa dị elu anaghị adị mfe iji, nsonaazụ nke ojiji dị iche na mgbasa ozi nke onye nrụpụta.
Ọnụahịa nke arịa ndị dị elu na-arị elu, ụfọdụ ngwaahịa ndị dị ọnụ anaghị adịkwa mfe iji. Nwada Wei, onye bi na Hexi District nke obodo ahụ, gwara ndị nta akụkọ na ya zụtara pan eji eghe ihe nke si na South Korea site na nkwanye ndị ahịa. N'oge ahụ, ọ sịrị na ụdị Pan a enweghị mkpuchi kemịkal, mana ọ ka nwere njirimara nke ịrapara. Agbanyeghị, mgbe inyochachara ntuziaka ahụ nke ọma, ị ga-amata na iji nweta nsonazụ nke ịghara ịrapagidesi ike na ite ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ogo mmanụ zuru oke mgbe ị na-esi nri. Dika ihe ahia a choro, i ghaghi ichere ka mmanu ahu kpoo oku ma gbaa oku tupu i tinye ihe ndi ozo. Ma Oriaku Wei kwuru na dika o siri mara na oburu na mmanu mmanu oku ma anwuru ma eghe, o nwere ike na-arịa ọrịa. Ọzọ n'ji, Nwada Liu, nọrọ fọrọ nke nta 2000 yuan na a abụọ-oyi akwa nchara steamer. Otú ọ dị, ọ chọpụtara na akwa oyi akwa uzuoku ahụ pere mpe nke na a gaghị eji ya. Enwere ike iji igwe eji okpukpu abụọ mee ihe dị ka otu-oyi akwa. Fọdụ ndị na-azụ ahịa na-ekwukwa na ụfọdụ ụdị spatulas na ngaji dị oke ọnụ anaghị adị mfe iji n'ihi ibu dị arọ ha na ụdị enweghị atụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha enweghị ọrụ ma e wezụga maka frying spatula na ngaji.
N’ezie, a ga-eji ite na ite n’ụbọchị ọ bụla. Uru bụ ihe kacha mkpa. Onye nta akụkọ ahụ gara ahịa wee mata na ọnụahịa nke arịa nri nke ụdị ndị a ma ama adịghị ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, pan a na-ejikarị eme ihe, ọnụahịa na-abụkarị ihe ruru yuan 100, yana mkpuchi na-enweghị mkpịsị nke pan pan, ihe karịrị yuan 200 nwere ike zụta, ma ọ bụrụ na ọ bụ ígwè nkedo nkịtị, pan nke eghe eghe eghe, ọbụlagodi erughị 100 yuan. . Na otu set nke oyi akwa igwe anaghị agba nchara steamer, dịkwa ka ogologo dị ka 100 yuan. Nwada Wu, bụ nwaamaala kwuru n'ajụjụ ọnụ o mere na otu enyi ya nyere ya otu ofe eji eghe eghe, nke dị oke mma, mana ka o jiri ya ọtụtụ oge, ọ chọpụtara na ọ na-arapara n'ahụ mgbe niile ma na-enye nsogbu. Ọ bụ ihe adaba iji mbụ 100 yuan igba ígwè frying pan n'ụlọ. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere ụdị ihe ahụ kwuru na ihe kacha mkpa bụ na arịa eji esi nri dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji, na ọ dịghị mkpa ịchụso ngwaahịa dị elu na-enweghị isi.
Post oge: Jul-01-2020
Esi merie eji nke imeoyi igba ígwè coo ...
Nkedo ígwè cookware ị ketara ma ọ bụ zụta si a thrift ahịa mgbe nwere a ike shei mere nke ojii nchara na unyi, nke na-ese nnọọ wetara. Ma echegbula, enwere ike wepu ya ngwa ngwa ma nwee ike weghachite ite nkedo na ọdịdị ya. 1. Etinye igwe eji esi nri n’ime akwa ...